Coil Galvanized, Galvalume Steel Coil, Ppgi Sheet - Lueding
BV, mari-pahaizana ISO ary fitsapana SGS dia azo omena mba hanomezana toky ny kalitaon'ny vokatray.
Mpanamboatra izahay ary manana ny orinasanay manokana, afaka mahazo vidiny mifaninana amin'ny kalitao avo ianao.
Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tadiavinay! Tsara laza amin'ity orinasa ity noho ny vokatra sy serivisy avo lenta.
Hebei Lueding Imp. & Exp. Co., Ltd. dia any avaratry ny tanànan'ny China-Shijiazhuang, akaikin'i Beijing. Izahay dia mamatsy ara-pahaizana ny PPGI, ny vy mifono vy, ny vy coil Al-zinc, ny tampon-tafo mitafo ary ny masinina miorina amin'ny horonan-taratasy. Ny orinasanay dia nanomboka namokatra PPGI, coil vy nandrisika, ary coil vy Al-zinc nanomboka ny taona 2003, ary nanomboka namokatra ireo ravina tafo mitafo fanitso nanomboka tamin'ny 2010. Izahay izao dia manondrana avy aminay amin'ity taona ity. Ny iraka ataon'ny orinasanay dia ny manompo ny mpanjifa amin'ny maha mpiara-miasa antsika, manohana ny mpanjifa amin'ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ny vidiny ambany. Ny politika lehibe indrindra eto aminay dia ny "Credit no politika ifotony sy tsara indrindra." Ny tsenanay lehibe dia ny Azia atsimo atsinanana, afovoany atsinanana, afrika, japon ary firenena amerikana atsimo. Manantena ny hiara-hivoatra aminao !!! Tongasoa anao ary manantena ny fanohananao mandrakizay!
Ny Fairth Canton an-tserasera faha-128 tongava amin'ny efitrano fandraisam-bolanay Ny vokatray: GI Coil / Gl Coil / PPGI Coil / Roofing Sheet sns Adiresy mivantana: https://ex.cantonfair.org.cn/pc/zh/exhibitor/4ab00000-005f -5254-e31d-08d7ed7aefee Fotoana mivantana: 15 Oktobra -24t ...
Tsenan-kojakoja vy nandrisika nataon'ny mpilalao fototra, ...
Ny Global Galvanized Steel Coil Marketplace dia manome tombana amin'ny antsipiriany momba ireo lafiny manan-danja rehetra momba ny tsena. Ny famakafakana ny toekarena manerantany Galvanized Steel Coil, dia manome fahitana lalina momba ny Galvanized Steel Coi ...